Waa Kuma Xiddiga Ka Tirsan Real Madrid Ee Ay Saxeexiisa Xagaaga Wada Doonayaan Arsenal, Chelsea & Manchester City? - Gool24.Net
Kooxaha Manchester City, Arsenal iyo Chelsea ayaa lagu soo warramayaa inay wada doonayaan saxeexa khadka dhexe ee Real Madrid ee Isco kaas oo wajahaya hubaanti la’aan mustaqbalkiisa ah kaddib xilli ciyaareed isku dhafan oo uu ku qaadanayo Bernabeu.
Sida lagu sheegay wargeyska El Desmarque, Madaxweynaha Real ee Florentino Perez ayaa doonaya inuu kor u qaado awooda dhaqaale ee kooxdiisa xilli uu isku diyaarinayo saxeexa Kylian Mbappe oo PSG ka tirsan waana sabab uu ciyaartoy u iibin karo.
Isco ayaa kamida xiddigaha Los Blancos kuwooda ay ugu macquulsan tahay in laga diro Estadio Santiago Bernabeu sababtoo ah tirada kooxaha ah ee xiisaha u muujinaya.
Aan ku bilawnee Chelsea oo si joogto ah ay saxaafada Spanish-ku ula xidhiidhinaysay saxeexa Isco ayaa sidoo kale la xusayaa in tababare Frank Lampard uu taageere u yahay xiddigaas oo uu aaminsan yahay inuu kasoo dhalaali karo Premier League.
Dabcan waxa wax lama filaan ah noqon doonta in Chelsea ay la saxeexato khad dhexe oo cusub oo weerar raacsan kaddib heshiiska ay la gaadheen Hakim Ziyech iyo inay horeba u haysteen Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek iyo Ross Barkley oo booskaas ku fiican.
Dhinaca kale Arsenal ayaa kamida kooxaha lala xidhiidhinayo 27 sano jirkan, Gunners ayaa u baahan kubad sameeye cusub oo No.10 ah xilli ay suurogal tahay in la fasaxo Mesut Ozil oo dhawaanahanba lala xidhiidhinayo inuu baxayo.
Ugu dambayn, Man City ayaa sidoo kale doonaysa saxeexa Isco xilli uu Guardiola isha ku hayo inuu isbedel xoogan ku sameeyo kooxdiisa oo aan xilli ciyaareedkan sidii la doonayay uga muuqanin Premier League sidoo kalena uu ka baxayo David Silva.